Alaabooyinka qaabeeya garkaaga | Ragga Stylish
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qaabeynta gadhkaaga
Garku wuxuu noqon karaa mid aad u macaan, xitaa noqda mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan ragga. Laakiin helitaanka gadhka xiisaha leh waxay qaadataa shaqo maalinle ah. Y mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ayaa ah qaabeynta gadhkaaga.
Tixgeli inaad ku darto badeecooyinka soo socda sida caadiga ah nadaafad maalmeedka si aad timaha wajigaaga ugu ilaaliso qaab jiliin ah maalintii oo dhan:
1 Shanlay gadhka
2 Beerta gadhka
3 Wax shaarib ah
Hadday ka samaysan yihiin alwaax ama waxyaabo kale, shanlooyinka gadhka ayaa lagama maarmaan u ah si aad uga faa'iidaysato timaha wejigaaga. U adeegso baalashada kahor si aad gadhkaaga u siisid qaabka aad rabto. Nidaamka qaabeynta ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya sidii loo aqoonsan lahaa xargaha u baahan in la jaro iyo in si isku mid ah loogu qaybiyo saliidaha maqaarka. Waad qaadan kartaa si aad gadhkaaga ugu taabatid fasalka wakhti kasta.
Shaaha Tree Utility Balm waa mid ka mid ah bidaarta gadhka ugu caafimaadka badan suuqa. Waxay kaa caawin doontaa inaad timaha wajiga ilaalisid oo aad dhigatid waxyaabo ay ka mid yihiin subagga cambe, lanolin, saliidda jojoba, ama subagga kookaha. Balmadan kaliya maahan mid cajaa’ib leh nafaqeynta iyo qaabeynta garkaaga, laakiin waa Waxaad sidoo kale mari kartaa maqaarka jirka iyo gacmaha si ay u ilaashadaan caafimaadkooda iyo dabacsanaantooda.
Wax shaarib ah
Ka taxadar gadhkaaga, € 10.95
Marka shaarib gaagaaban noqdo shaarib dhexdhexaad ah ama dheer, alaab ayaa loo baahan yahay si loo qaabeeyo. Capt. Fawcett's ayaa kuu oggolaan doonta inaad dejiso adoo siinaya caraf udgoon wanaagsan. Qaado qanjaruufo, kuleyli inta u dhexeysa suulkaaga iyo fartaada, kuna kala qaado shaaribkaaga. Hadda shanlee, adoo siinaya qaabka aad ugu jeceshahay. Tixgeli inaad abuurto laba qaybood oo aad shanleeysid si bushimaha loo nadiifiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qaabeynta gadhkaaga